KACDOON KU WAJAHAN GANACSATADA - Somaliland Post
Home Maqaallo KACDOON KU WAJAHAN GANACSATADA
KACDOON KU WAJAHAN GANACSATADA
Sida aynu la wada socono wadankan aynu xornimadiisii inagu qaadatay inaynu xitaa cid aynaan is gayin ku abtirsano SI LOO BADBAADIYO NAFAHA ee aynu uso uuus miiranay ee aynu ku weynay inka badan 100,000 oo ruux maanta laga yeeli mayo ganacsato yar oo shalay wadanka timid dhibna aan lasoo qaybsan inay danyarta ku kalifaan inay habeenkii casho la’aan seexdaan.
Maanta wadanku marayaa abid halkii ugu qaalisanayd maceeshada iyadoo dawladu aad ugu dadaashay in wax hoos loo dhigo.
Iyadoo sidaasa hadana waxaa ku ciyaaraya wadanka rag lagu magacaabo MAGAFAYAASHA DANYARTA ama ganacsatada dhiiga dadka.waxay ku seexdaan saxmada iyo buuqa sicir bararka waxay ku raaxaystaan , kalamadaha ugu naxariista daran sida , hooyo wax iga daa IWM .
Hada dadku wuxuu marayaa inay magaalooyinka iskaga yaacaan waayo mushaharka laga qaato wadanka marka laysku celceliyo waa 200-300 oo doolar marka aad lacagtii sida u kala bixiso maxaa hadhaaya
Meeye biyihii,Meeday lacagtii laydhku,Meeday lacagtii waxbarashadu,Meeday lacagtii arad beelku
Miyaanay waali iyo wareer ahayn.
Kaa seddexda boqol qaadanayaa waa ka ugu nolosha fiicane bal kawaran ninka kasii liita waar ganacsatadii umadii way gumaadee haloo gurmado,Walaahi waxa dhici doona hadii uuna ilaahay faraj u furin kacdoon maceeshada ah oo aan loo aabayeelay mid kasta oo ganacsi haya waan mid imikaba qalbiga danyarta ku taagan . Wadanka dawladi ma maamushee ganacsataa maamusha.Ilaahay wuu eegayaa ganacsatada dhiiga ka miiraysa umadooda tasowday ee dabka qaarkood aanay shidan .
Waxa wadan walba lagu majeertaa ganacsadooda iyo baayac mushtarkooda,Dawladu wax walba way jabisey shidaal iyo cashuurba lkn ganasatada iimaan beeshay ayaa waxan wada .
Abwaan GARIYE ILAAHAY GODKA HA U NUUREE AYAA WUXUU YIDHI
-Arligeynu ku noolnahee
irama daatal cimaadii
aayadaha lagu sheegay
ninka maanta ortiisiyo
ka adkeystay gob maaha
dibna loo igman mayo
Ganacsatada bwaxaan leenahay ilaahay maanta hadii danyartaasi le’ato ku ay wax ka baaba’yaan waa idinkee ku tashada wadankana hadii wax dhacaan kuwa ugu nuguli waa ganacasato kuwa ugu arxanka daranina waa ganacsato .
Waar ganacsatooy waa diideen inaad umada u naxariisataane bal eega hadda waxaad ka dambarsataan , dawladayadii oo noo naxariisatay ayaad idinku cunaha nahaysaane bal hada eega waxaad dhiiga danyartee aad jaqaysaan ka faa’iidaan.
Waxaan bulshada reer Somaliland u sheegayaa waar dawlad iyo xisbi iyo siyaasadba kazoo jeestoo ganacsatada ina dhiig miiratay aynu iska dhicino.